Inkomba ye-Ultraviolet: iyini, izici nokubaluleka | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Amanani ahlukahlukene emisebe eza emhlabeni wethu evela elangeni. Enye yale misebe yi-ultraviolet. Yena Inkomba ye-ultraviolet Kuyindlela yokuqina kwemisebe ye-ultraviolet ekwaziyo ukufinyelela ebusweni bomhlaba. Siyazi ukuthi ilanga likhipha imisebe ebangeni elibanzi le-spectrum kagesi. Ngokukhethekile, ikhipha inani elikhulu lemisebe endaweni ye-ultraviolet. Le radiation ibaluleke kakhulu ngoba kuyadingeka, kodwa futhi iyingozi.
Ngakho-ke, sizonikezela le ndatshana ukukutshela zonke izici nokubaluleka kwenkomba ye-ultraviolet.
2 Ukulimala Kwe-UV Index
3 Amanani we-UV Index
4 Izindlela zokunciphisa imisebe ye-ultraviolet
Sishilo ukuthi inkomba ye-ultraviolet imane nje iyisilinganiso samandla emisebe ye-ultraviolet ekwaziyo ukufinyelela ebusweni bomhlaba. Yonke imisebe ekhishwa yilanga ihlukaniswe yaba izingxenye ezahlukahlukene zohlu lwe-electromagnetic. Imisebe ye-Ultraviolet ihlukaniswe izingxenye ezintathu kuye ngamandla ayo. Imisebe enamandla kakhulu ye-ultraviolet yaziwa njenge-UVC futhi isebenza kuma-wavelengths asukela ku-100-280 nm. Ububanzi bemisebe ye-UVB busuka ku-280-315 nm. Ekugcineni, imisebe ye-UVA iyingozi encane, ngomqondo ongokomfanekiso, futhi iqukethe izindawo ze-electromagnetic spectrum ezisukela ku-315-400 nm.
Ingxenye eyingozi kakhulu yemisebe ye-ultraviolet yimisebe ye-UVC. Le radiation, ngenhlanhla, ayifiki ebusweni bomhlaba njengoba imuncwa umoya wethu. Ngokuyinhloko, ingxenye enkulu yale misebe ifakwa ungqimba lwe-ozone. Noma kunjalo, Imisebe ye-UVB ifakwa emkhathini ngama-90% cishe. Yize ama-UVA nawo amuncwa ngesilinganiso esincane, ingxenye yawo ifinyelela ebusweni bethu.
Siyazi ukuthi imisebe yelanga iyadingeka ekukhuleni kwempilo njengoba siyazi. Kumele kukhunjulwe ukuthi i-photosynthesis ezitshalweni yenzeka ngenxa yesenzo semisebe ye-ultraviolet futhi abantu badinga ukuvezwa yilanga ukuze bahlanganise uvithamini D esikhunjeni. Ukushoda kwale vithamini emzimbeni kungaholela ekunciphiseni kwamaminerali amathambo. Ngakho-ke, kubalulekile ukushisa ilanga nsuku zonke okungenani isigamu sehora. Kodwa-ke, uma sinokuchayeka ngokweqile ekubukekeni kwale misebe ye-ultraviolet kungaba yingozi empilweni. Futhi imisebe ye-ultraviolet ingadala umonakalo ku-collagen yesikhumba ngakho-ke yandisa ukuguga ngaphambi kwesikhathi.
Ukulimala Kwe-UV Index
Inkomba ye-delta violet iyona elinganisa ubude bamaza nobuningi namandla emisebe ye-ultraviolet ekwaziyo ukufinyelela ebusweni bomhlaba. Kodwa-ke, imisebe ye-ultraviolet ingadala ukulimala kwe-DNA kanye nokuguquka kwezakhi zofuzo. Kunobufakazi obuningi obuvela ezifundweni obukhombisa ukuthi bungayandisa kakhulu ingozi yomdlavuza wesikhumba. Ngokunjalo, kungadala izinkinga ezinkulu zamehlo njengamehlo. Kunezinhlobo ezahlukene zesikhumba kanti ezinye zisengozini kakhulu kunezinye. Ukuzwela kwemisebe ye-ultraviolet yesikhumba kuncike kulokho okwaziwa njenge-phototype. I-phototype inesibopho sokulinganisa ikhono lesikhumba lokumunca imisebe yelanga. Okungukuthi, ikhono lesikhumba lokukhiqiza i-melanin. Inkomba ye-violet kumele yaziwe kahle ngokwazi ukuvikelwa okufanele sikusebenzise esikhumbeni ngemisebe yelanga ngokusho kobuzwe esinabo. Abantu abanamakhanda abomvu noma ama-blonde bazwela kakhulu kunama-brunette.
Inkomba ebizwa nge-ultraviolet inesibopho sokukala ukuqina kwemisebe ye-ultraviolet efinyelela ebusweni bomhlaba ebangeni ngalinye lesisindo elinesisindo salo esiyingozi kubantu. Le nkomba yethulwa ososayensi be-Environment Canada ngo-1992. Ukusuka lapho, amazwe amaningana wethula izinkomba zawo kuze kube i-WHO yethule inkomba ejwayelekile yomhlaba.
Amanani we-UV Index
Inkomba ye-UV inenani elincane lemfundiso eyi-0 futhi ayinalo inani eliphakeme. Inkomba ejwayelekile iyona esivumela ukuthi senze izibikezelo ezahlukahlukene ze-UVI eqhathaniseka emhlabeni jikelele. Imibala esetshenziselwa ukumela i-vane yokuqala iluhlaza ngamanani aphansi we-UVI phakathi kuka-0 no-2, ophuzi ngamanani alinganiselwe e-UVI phakathi kuka-3 no-5, owolintshi onobungozi obukhulu phakathi kuka-6 no-7 futhi kubomvu ngamanani aphezulu kakhulu e-UVI aphakathi kuka-8 no-10. Ekugcineni, futhi umbala onsomi utholakalela amanani we-UVI eyeqile ngamanani amakhulu kuno-11.
Ngokuya ngenani le-UVI futhi ngokuya ngohlobo lwesikhumba lomuntu ngamunye, ubudala, njll. Kumele kuthathwe izinyathelo ezanele ukuvikela imisebe ye-ultraviolet. I-UVI incike ezintweni ezimbalwa futhi ingashintsha unyaka wonke. Isibonelo, kuya ngenani le-ozone in ikholomu yomkhathi, ukuphakama kwelanga, ukuphakama kwendawo esikuyo nobumnyama khona ngaleso sikhathi. Akufani nokuba sesilinganisweni solwandle kunasesiqongweni sentaba. Inani lemisebe yelanga elizothinta isikhumba sethu liyahlukahluka kakhulu. Kungokufanayo nangongqimba lwe-ozone. Umgodi we-ozone owesabekayo ubangelwe ukuncipha kokuhlushwa kwe-ozone ebushelelezi futhi manje isibalo esiphezulu semisebe yelanga ye-ultraviolet ebusweni bethu.
Izindlela zokunciphisa imisebe ye-ultraviolet
Sizonikeza ezinye zezinyathelo ezibalulekile ukuze sikwazi ukuzivikela ekusebenzeni kwemisebe ye-ultraviolet esikhunjeni sethu:
Nciphisa ukukhanya kwelanga ngezikhathi ezinamandla zosuku. Lawa ngamahora aphakathi nendawo lapho inani lemisebe ye-ultraviolet yelanga likhulu kakhulu.
Hamba emthunzini ngezikhathi ezimaphakathi zosuku. Njengoba kufanele sigweme ukuzibeka elangeni lamahora aphakathi nendawo, uma singenayo enye indlela kufanele siye emthunzini.
Gqoka izingubo zokuzivikela
Gqoka isigqoko esinomphetho obanzi ukuvikela amehlo akho, ubuso nentamo.
Vikela amehlo ethu ngezibuko zelanga
Sebenzisa ukhilimu wokuvikela ilanga obanzi.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngenkomba ye-ultraviolet nokubaluleka kwayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Inkomba ye-Ultraviolet